12 Oktobra 2019 - FJKM Québec - Canada
11 octobre 2019 by Njaka Ramanandafy
JEREMIA 11 : 1-23
11:1 Izao no teny tonga tamin’ i Jeremia avy tamin’ i Jehovah:
11:2 Mihainoa ny tenin’ izao fanekena izao ianareo, ary mitenena amin’ ny olon’ ny Joda sy amin’ ny mponina any Jerosalema,
11:3 Ary ataovy aminy hoe: Izao no lazain’ i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Ho voaozona izay olona tsy mankatò ny tenin’ izao fanekena izao,
11:4 Izay nandidiako ny razanareo tamin’ ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin’ ny tany Egypta, dia avy tao amin’ ny memy fandrendreham-by, ka nanaovako hoe: Mankatoava ny feoko, ary ataovy ireo araka izay rehetra andidiako anareo, dia ho oloko ianareo, ary Izaho kosa ho Andriamanitrareo,
11:5 Mba hotoviko ny fianianana izay nianianako tamin’ ny razanareo, dia ny hanomezana azy tany tondra-dronono sy tantely tahaka ny amin’ izao anio izao.Dia namaly aho ka nanao hoe: Ho izany tokoa anie, Jehovah ô!
11:6 Ary hoy Jehovah tamiko: Torio any an-tanànan’ ny Joda sy any an-dalamben’ i Jerosalema izany teny rehetra izany, ka lazao hoe: Henoy ny tenin’ izao fanekena izao, ka ataovy izany.
11:7 Fa nananatra mafy ny razanareo Aho tamin’ ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin’ ny tany Egypta ka ambaraka androany: eny, nifoha maraina koa Aho ka nananatra hoe: Ankatoavy ny feoko.
11:8 Nefa tsy nankatò izy na nanongilana ny sofiny, fa samy nandeha tamin’ ny fisainan’ ny fo ratsiny izy; noho izany, hataoko mihatra aminy ny teny rehetra amin’ izao fanekena izao, ilay nasaiko nataony, nefa tsy nataony.
11:9 Ary hoy Jehovah tamiko: Misy tetika fikomiana hita ao amin’ ny Joda sy amin’ ny mponina any Jerosalema.
11:10 Fa niverina nankamin’ ny heloky ny razany izy, izay nandà tsy nihaino ny teniko, ary lasa nanaraka andriamani-kafa izy ka nanompo azy; ny taranak’ Isiraely sy ny taranak’ i Joda efa nivadika ny fanekeko, izay nataoko tamin’ ny razany.
11:11 Koa izao no lazain’ i Jehovah: Indro, Izaho hahatonga loza aminy, izay tsy azony handosirana; ary na dia hitaraina amiko aza izy, dia tsy hihaino azy Aho.
11:12 Dia handeha ny tanànan’ ny Joda sy ny mponina any Jerosalema ka hitaraina amin’ ireo andriamanitra izay efa nandoroany ditin-kazo manitra; nefa tsy hahavonjy azy akory ireny amin’ ny andro fahoriany.
11:13 Fa araka ny isan’ ny tanànanao ry Joda, no isan’ ny andriamanitrao; ary araka ny isan’ ny lalamben’ i Jerosalema no isan’ ny alitara naorinareo ho an’ izany zavatra mampahamenatra izany, dia alitara handoroana ditin-kazo manitra ho an’ i Bala.
11:14 Koa aza mivavaka ho an’ ity firenena ity ianao, ary aza manandratra fitarainana na vavaka ho azy; fa amin’ ny andro izay hitarainany amiko noho ny fahoriany dia tsy hihaino azy Aho.
11:15 Hanao inona ao an-tranoko ny malalako, fa efa nanao ratsy niaraka tamin’ ny maro izy, ary ny hena masina dia nesorina taminao? Raha manao ratsy ianao, dia mifaly.
11:16 Hazo oliva maitso sady misy voany maha-te-hizaha no nataon’ i Jehovah anaranao; tamin’ ny fihorakorahana be no nandrehetany afo taminy, ary notapahina ny rantsany.
11:17 Fa Jehovah, Tompon’ ny maro, Izay namboly anao, no nanambara ny loza hanjo anao, noho ny ratsy nataon’ ny taranak’ Isiraely sy ny taranak’ i Joda, izay nahavoa ny tenany ka nahatezitra Ahy, dia tamin’ ny nandoroany ditin-kazo manitra ho an’ i Bala.
11:18 Ary nampahafantarin’ i Jehovah ahy izany, ka dia fantatro; tamin’ izany dia nasehonao ahy ny fanaony.
11:19 Fa izaho dia tahaka ny zanak’ ondry na omby izay entina hovonoina; ary tsy fantatro fa izao no tetika nataony namelezany ahy: Aoka hosimbantsika ny hazo mbamin’ ny voany, ary aoka hofongorantsika hiala amin’ ny tanin’ ny velona izy, mba tsy hotsarovana intsony ny anarany.
11:20 Nefa, ry Jehovah, Tompon’ ny maro ô, Izay mitsara marina, ka mamantatra ny voa sy ny fo, aoka ho hitako ny famalianao azy, fa aminao no efa nanambarako ny adiko.
11:21 Koa izao no lazain’ i Jehovah ny amin’ ny mponina ao Anatota, izay mitady ny ainao ka manao hoe: Aza maminany amin’ ny anaran’ i Jehovah, fandrao matin’ ny tananay ianao,
11:22 Izao no lazain’ i Jehovah, Tompon’ ny maro: Indro hofaiziko izy, ka ny zatovo ho fatin-tsabatra, ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho fati-mosary;
11:23 Ka tsy hisy hiangana izy; fa hahatonga loza amin’ ny mponina ao Anatota Aho amin’ ny taona hamaliako azy.
Mitohy ny filazana loza mahatsiravina hanjo ny firenena Israely . Ny antony?
1-Nivadika ny fanekena Israely
Nanao fanekena taminy ny Tompo fa hanome azy tany tondra-dronono sy tantely, ary izy ireo kosa tsy hanana Andriamanitra afa-tsy Izy Tompo irery ihany , araka ny voalaza eto hoe: « Mihainoa ny feoko , ary mankatoava ireny araka izay rehetra andidiako anareo , dia ho oloko ianareo , ary Izaho kosa ho Andriamanitrareo »(and4)
2-Vokany : tonga ny ozona!
Ho tanteraka aminy izay voalaza hoe:« ho voaozona izay olona tsy mankato ny tenin’izao fanekena izao » (and3). Mitodika amintsika koa izany eo anoloan’ireo fanekena nifanaovantsika tamin’ny Tompo : nitana ny fanekena nataontsika ve isika sa nivadika? Fa na ny vavaka aza tsy hahazoam-baliny raha ivadihana ny fanekena natao : »aza mivavaka ho an’ity firenena ity…tsy hihaino azy Aho » , hoy ny Tompo (and14).
3-Nanda ny teny nampitondrain’ny Tompo ny olona
Maharary manokana ity tranga tao Anatota ity satria tananan’i Jeremia io, saingy sahin’izy ireo ny niteny hoe: »Aza maminany amin’ny Anaran’i Jehovah fandrao matin’ny tànany ianao » (and21). Saingy moa tsy toy izany koa no nanjo an’i Jesoa tao Nazareta , tanàna nahabe Azy? (Lio 4.16,28,29).